Golaha wasiiradda Soomaaliya oo shaqada ka ceyrshay taliyihii booliiska iyo agaasimihii nabadsugida - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaGolaha wasiiradda Soomaaliya oo shaqada ka ceyrshay taliyihii booliiska iyo agaasimihii nabadsugida
Sawirka: Taliyaha nabadsugida Cabdulaahi Maxamed Sanbalooshe (midig). taliyaha booliiska Cabdixakiin Daahir Saacid (bidix).
Muqdisho-(Puntland Mirror) Golaha wasiiradda Soomaaliya ayaa shaqada ka ceyrshay taliyihii booliiska Cabdixakiin Daahir Saacid iyo agaasimihii nabadsugida Cabdulaahi Maxamed Sanbalooshe.
Golaha ayaa go’aankan qaatay kadib kulan deg deg ah oo ay ku yeesheen Muqdisho maanta oo Axad ah.
Tilaabada ayaa timid hal maalin kadib gaari qarax ah lala eegtay huteel Naasahablood ee Muqdisho, waxaana ku dhintay ugu yaraan 25 qof oo ay ku jireen masuuliyiin, Al-Shabab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas.
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 25 askari oo katirsan ciidamada Puntland ayaa la dilay kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo kuyaala buuraha Galgala subaxnimadii hore maanta oo Khamiis ah, sida uu [...]